Nook Tablet 7, ny famelomana indray an'i Barnes & Noble ho $ 50 | Ireo mpamaky rehetra
Joaquin Garcia | | Barnes & Noble, takela-bato
Fotoana lasa izay dia nahalala tatitra iray tao amin'ny FCC niresaka izahay takelaka vaovao avy amin'i Barnes & Noble miaraka amin'ny efijery 7 ″ izay mety hanana vidiny ambany dia kely, manakaiky ny 50 dolara. Ankehitriny, Barnes & Noble dia nanolotra azy tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny tranokalany, maha-izy azy ny varotra manaraka zoma mainty ary amin'ny $ 49,99.
Ity takelaka vaovao ity dia ho fantatra amin'ny hoe Nook Tablet 7 ary B&N no hamorona azy, izany hoe tsy ho maodely avy amin'ny Samsung na orinasa hafa. Na eo aza ny zava-misy fa tsy hatao any Etazonia ny fananganana.
Ny Nook Tablet 7 dia hanana efijery 7-inch vahaolana amin'ny 600 x 1024 teboka. Ny fitaovana dia hanana processeur 1,3 Ghz MediaTek miaraka amina memoriitra 1 Gb ary fitehirizana anatiny 8 Gb izay azo hitarina amin'ny alàlan'ny slot microsd. Ho fanampin'ny Wifi sy bluetooh, manana fakantsary roa ilay fitaovana, anoloana 2 MP ary aoriana 5 MP. Ny zava-drehetra dia hanohana bateria 3.000 mAh, bateria lehibe hanome ilay fitaovana fahaleovan-tena mihoatra ny 8 ora. Miankina amin'ny fampiasana omentsika ilay fitaovana.
Ny fahasamihafana lehibe amin'ny $ 50 Fire dia izany Ny Nook Tablet 7 dia manana fidirana amin'ny Play Store ary havaozina amin'ny Android Nougat, zavatra izay tsy ananan'ny takelaka Amazon. Ary ankoatry ny fahafahany mividy sy mamaky ebook ao amin'ny Barnes & Noble sy ny Play Store, ny mpampiasa dia afaka mamaky ebook avy amin'ny rindranasa hafa azon'izy ireo apetraka, toy ny ebook avy ao amin'ny La Casa del Libro, avy any Kobo na koa avy any Amazon.
Araka ny efa nolazainay, ny tablette dia hamidy amin'ny zoma Balck manaraka ary toa mahaliana izany na dia tsy dia tsara loatra aza ny famahana ny efijeryNa ahoana na ahoana, raha manana vidiny ambany toy izany dia mendrika hanandramana ary izany no hieritreritra ny maro. Angamba miaraka amin'ity maodely ity, ny B&N dia hihoatra ny iray tapitrisa ny vola amidy Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Barnes & Noble » Nook Tablet 7, ny famelomana indray an'i Barnes & Noble $ 50
Ny kios Google Play dia manana famolavolana vaovao ary koa kinova an-tranonkala
Amazon dia nanomboka nivarotra Kindle eReaders voamarina sy voaverina